SARACEN: TUSAALAHA DIB-U-ADDOONSIGA SOOMAALIYA – Puntland News.net
Home 2017 February 5 Somali News SARACEN: TUSAALAHA DIB-U-ADDOONSIGA SOOMAALIYA
SARACEN: TUSAALAHA DIB-U-ADDOONSIGA SOOMAALIYA
February 5, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 1
Beryahan wxaa soo kordhaya qeylo dhaanta la xidhiidha xadgudubyada iyo addoonsiga ka soo daahiraya xerada ay magaalada Boosaaso ku leedahay shirkadda SARACEN oo ah shirkad diyaarisa xoog calooshiisa u shaqayste ah oo lagu qabsanayo Soomaaliya.
Shirkaddan iyo hawlgalkeedaba waxaa maalgeliya dawladda Imaaraadka Carabtu oo wakiil ka ah quwado waaweyn oo daaha dabadiisa ka maamulaya dawladda carbeed ee aynu muddaba jaalka ahayn. Shirkadda waxaa maamula shaqaale iyaguna calooshooda u shaqaystayaal ajnabi ah kuwaas oo qawmiyado dhawra isugu jira carabse u badan. Waxaa shirkaddu ay dalka ka shaqaalaysay rag Soomaali ah oo badankooda la askareeyay, si loogu ilaaliyo joogitaanka sharkaddan shisheeye iyo shaqada qarsoodiga ah ee ay dalka u joogto. Shaqaalahan Soomaalida ah badidooda ayaa laga xushay qabaa’illada maamulka Puntland ka tirsan, sannad walbana waa la kordhiyaa oo rag hor leh oo dhalliyaro ah ayaa la askareeyaa.
Dabadeed marka hubka, gaadiidka iyo raashinku u ay soo gaaraan dekedda Boosaaso ayaa lagu wareejiyaa SARACEN iyana xeradeeda ay ku xaraysaa. Hubkaas iyo gaadiidka ayaa dabadeedna tafaariiq iyo jumlo intaba looga iibiyaa ciddii lacag haysata oo gobolkan geeska africa joogta oo badeecadan qiimaha jaban joogta iibsan karaysa. Lacagta iibkaasi ka soo xarootana waxaa qaybsada madaxda maamullada ee badeecadan magacooda
lagu soo qaado, safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya iyo madaxda SARACEN oo adeegyada rarista iyo dejinta, xaraynta iyo farsamadaba gacan ka geysta.
Inkasta oo wejiga dhabta ah SARACEN uu yahay kaa noocyada badan ee aan ka soo hadalnay, haddana shirkaddan ayaa dalka lagu soo dejiyay welina ay ku joogta shaqo maqaarsaar ah oo aan ahayn tan dhabta ah ee ay dalka u joogto. Maamulayaasha Puntland waxay ku doodaan iyo shacabkoodana u sheegeen in shirkaddani Puntland u timid in ay u tababarayso ciidan booliis ah oo la dagaallama burcad-badeedda iyo maraakiibta sida sharcidarrada ah uga kalluumaysta badda Soomaaliya qaybta ay Puntland ka maamusho. Haseyeeshee hawlgalka keli ah ee la xidhiidha burcad-badeed ee ciidaka SARACEN fuliyeen wuxuu ahaa dabayaaqadii sannadkii 2012 mid lagu soo furtay shaqaale 20
ka badan oo madaxfurasho burcaddu ugu haysteen xeebta Garacad muddo sannad ka badan. Weerarkan ayaa la qaaday markii qaar ka mid ah dawladahii ay ka dhasheen shaqaalaha la haystay ay ka codsadeen Cabdiraxmaan Faroole in uu sameeyo dedaal kasta oo lagu soo furan karo shaqaalahaas ku jirey muddada dheer gacanta burcadda.
Xagga kalluumeysiga sharci darrada ah kolka aan eegnana waxaa cad oo markhaati loo ahayaa, aniga qudheyduna aan joobjoog u
noqday bartamihii 2015 askarta SARACEN (oo maamulku u ula baxay PMPF) oo difaacaysa doonyo iyo markab laga lahaa dalalka Iiraan, Koonfurta Kuuriya iyo Yemen oo si aan sharci ahayn uga kalluumaysanayay xeebta dhow ee degmada Baargaal, ka dib markii kalluumaysto degmada degaanka ahi ay isku xilsaareen soo qabashada maraakiibta iyo doonyahaas doolka
Bil ka dib xeebta degmada Baargaal waxaa ku soo xidhay markabkii iyo doonyihii kalluumaysatada degaanku ay hore u qabteen ka hor intii ayan ku wareejin ciidanka SARACEN. Markan markabka iyo doonyahani waxaa ay wateen ruqsad looga soo jaray Boosaaso.
Ayaandarro aad u weyn bay ku tahay Soomaali in 56 sano kadib markii ay Soomaaliya ka xorowday gumaystayaashii Reer Yurub ee sida foosha xun u cadaabi jirey, in maanta carab calooshooda u shaqaystayaal ah ay Soomaali dhulkoodii ku karbaashayaan. Maanta tani waa
taasaale yar oo aayaha cayn wareegay ka mid ah. Badanaa inta sidan iyo si ka xanuun badan loo uusduugey oo aan laga warhelin dulmiga lagu falay ee lagayaabo in kol horeba ajnabiga dalka qabsaday iyo dullaaliinta u shaqaysaa ay xogtooda aaseen. Bal iyana eega waxa ka dhacaya gobollada koonfureed ee dalka iyo sida AMISOM u gumaadeyso shacab masaakiin ah iyo xoolahooda. Wali ma aragteen kuwan madax-ku-sheegga ah oo maalin qudha dhibkaa ka hadlaya? Mase ka hadli karaan xitaa hadday hadli lahaayeen?
Haddaba maanta maxaa Soomaaliyeey nala gudboon? Maanta hawsha noo taal hadal ma aha, calaacal arrintu ma joogto. Waxaa ay taagan tahay wax-ka-falid. Waa halgan gobonimodoon degdeg ah iyo isxoreyn xaal u buka.Waxa keliya ee maanta noo bannaan waa ku dhaqaaqista dariiqii aynu
xorriyad dib ugu hanan lahayn. Waa naf iyo maalba wax loo huro. Waa baadidoonka karaamada luntay. Shaqadaasna cid noo qabanaysa ma jirtee, waa aniga iyo adiga cidda ay martida u tahay. Kuwa ugu horreeya oo halgankaasi aan isaga weecinaynno waa calooshooda u shaqaystayaasha’ (missionaries) diirka nooga eg ee dullaalka u ah kuna gudban isticmaarka, in nalgu addoonsado ciiddeenna horseedka ka ah. Kuwaa marka aan ka takhalusno ayaa wajihi doonnaa xogagga gumeysiga cusub ee SARACEN ka mid tahay.
Burhaan Daahir, Wariye iyo Xogbaadhe (researcher) madaxbannaan
One thought on “SARACEN: TUSAALAHA DIB-U-ADDOONSIGA SOOMAALIYA”
A.A.Xade February 5, 2017 at 11:29 am · Edit
SARACEN oo billaawday dib u ADDOONSIGA Somaliya!!!!!!!
Eraygan micnihiisu wuxuu noqonayaa in Somaliya horay loo Addoonsaday, haddana isla Addoonsigii aay shirkadani ku soo celisay!!!! Eesh calaa weriye!!!